#OromoProtests, May 29, 2016 -
Dhimmi kun huda ilmaan oromoo ilaallata kan quuqama lammii qabdanu sher godhaa wal dhageessisaa waan barnoota qabu waliif qooduu hin jaallatu silaa namni keenya
#‎oromoprotests‬ Caamsaa 29,2016) Godinaalee Arsii Aanota heddu keessatti hidhattoonni Agaazii ummata dararaa jiru. Dargaggeessa qabanii tumuu fi dhiiraa fi dhalaa wajjiin deemtu yoo argan dhiira biraa qabanii tumuun isii dhalaa ammoo gudeedaa jiraachun dhagahame.
Gama biraan manneen namaa hanga baadiyyaatti Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo manaa qabdan fidaa jedhanii manneen jiraattotaa sakatta’uun akkuma itti fufetti jira.
Waraanni wayyaanee daangaa biyyattii eeguu dhiisee ilmaan Oromoo bahaa fi gala isaanii eegee reebuu hojii isaa godhatee jira.
Lammii keenya gama hararge QOBBOO .
YEROO ammaa kana agaaziin humna guddaan ummata Qobboo irratti duula ballaabanuun humna guddaan itti duulee xiqqaaf guddaa osoo hin janne karaaraa guranii tumuufii hidhaa jiran guutumatti dukkaanaafii hoteela warra jimaa gurguru osoo hin hafin cufsiisuun tarkaanfii hamaa irratti fudhachaa jiranyeroo kanatti ummanni calanqo kaara milleefii dadarifii baadiyyaan dirmachuun lammii keenya dandamachiisu qabdan
Gaaddisa Dhugaa Caamsaa 29, 2016
‪#‎OromoProtests‬ guyyaa arraaa Caamsa 29, 2016 hararge baha magaala Qobo keessaatti uummaanni oromoo nannaawwa san jiranifi barattoonni rakkoo uummaata keenyarraa agaaziin geessaa jiru balaleeffachun mormii isaani kan durani caallaatti itti fufa jiru.
Biyya dhabuun, mirga dhabuun waan baayyee nu godhe. Otuu biyya qabaannee sodaa malee galla. Otuu biyya qabaannee biyya keenya jennee bibirannaa tokko malee tikeeta kutannee baanee deemna. Garuu warri biyya qaban, warri mirga qaban guyyaa itti biyya namaa irratti abbaa ta’an wal waamanii dibbee reebanii Caamsaa 20 kabajatu. Nuti warri biyya hinqabne ammoo awwaalcha nama nu duraa du’ee irratti argamnee boonyee awwaallachuufillee mirga hin qabnu. Otuu Oromiyaan kan Oromooti taatee har’a Calliyaa Gullisoon jira. Otuu biyyattiin kan keenya taatee Akaakaa koon jaalladhu awwaalcha isaarra dhaabbadheen boo’ee nagaa itti dhaama. Garuu Oromoon miilla malee biyya hinqabu. Miilla yoo dhiibbaan, dararaan, hidhaa fi ajjeechaan itti ammaatu ittiin deemee biyyaa ba’u qofa kan qabu. Kana caalaa waan nama gubu, garaa namaa bobeessu, nama waadu hin jiru. Biyya koo yoon dhaqe jedhanii fagootti alagaa biyya ofiirra qubatee jiru sodaachuu caalaa waan nama dhukkubsachiisu hin jiru. Dhalli namaa hiyyeessa ta’ee, rakkatee biyya isaa irratti abbaa ta’ee jiraachuu waan fakkaatu hin jiru biyya lafaa kanarra.
Abdii Fixee dhugaa keetii
#‎Oromoprotests‬, Caamsaa 29,2016
Haalli Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa Ulfaachaa Dhufee Jira, Sagaleen Diddaa Dhaga’amaa Jira
Dhimma filannoo peresedaantii Barataa irratti, Gocha mooraan raawwachaa jirtu FXG dhoosuuf sababa guddaa uumaa jira.
Peresedaantii Barattootaa ka ture barataa Dabalee Asaffaa haqummaan waan hojetaa ture qofaaf hanga jiraachu isa dhorkanitti ka deemaa jiran. Barattoota Oromoo mooraa Jimmaa hunda keessatti quuqamaaf aarii jabaa uumaa jira. Kanarratti guyyaa har’aa Walga’ii dirree taphaa Xiqaa (min-studium) taasifamaa tuterratti barattoonni gamtaan akka ta’anitti dabaleef sagalee dhageessisaa turanii jiru.
Haa ta’uu malee mirgi barataa ammallee eegamaa kan hin jirre ta’uu, Haala filannoo hoganaa barattootaarratti icciitiin gadi baate kan mul’iftu, Dabalee Asaffaa dirqamaan akka Filannoorraa haqamu ka jedhuuf, Dhaabnisaanii mugduun OPDO nama amanattu Guyyoo barataa jedhamu filuuf qophii akka xumuranii jiran Icciti achii baate nii ibsiti.
Guyyoon: Hojii basaasummaarratti dammaqinaan nama hojjeta ture yoo ta’u,Barataa hedduu galaafachiisaa akka ture nii beekama.Kanaaf Guyyoon ka Filannoo darbu taanaan Barataa Oromootiif Mirgi lubbuun jiraachuu kiyyoo jabaa keessa galti.
Walumagala Guyyoon kan bara kana filamee darbu taanaan,barri dhufu Barataa moorichaatiif Gadadoo ta’uun wal nama hin gaafachiisu
Filannoo kana akka yaadanitti milkaa’uu dhorkuuf Tarkaanfilee barattootaan godhamuu qaban
1) Sagaleen Guyyoof akka hin laatamne wal hubachiisuu
2) Mormii har’a eegalame jabeessuun itti fufuu
3) Sagalee keenya guyyaa guyyaan Akka Dabalee Asaffaa Boordii filannoorratti dhiyaatu gaafachuu
4) Dhimma nama OPDO malee barataa hogganuu hin danda’u jedhu balaaleffachuun
5) Haala quucaruu dimokiraasii biyyattii ka dhugoomsu ta’uusaaf Mirgi filuuf filatamuu guutummaan haqamee jiraachuu Dhageetti addunyaaf taasisu
6) Irra deddeebiin Falmachuun Dabalee Asaffaa Akka filannootti dhiyaatu Taasisuu
Gurmuu Barattoota Moorichaarraa
Gumiin Gadaa Tuulamaa Guyyaa kaleessa 19/09/2008 Salaalee keessaatti haarawomfamuun, saglaan yaa’ii bOORANAAtiif aanaa hundarraa nama 1’1 filuun, Qomoon warra Tuulamaa Godina salaaleetti sirna Gadaa Salaalee dhokaate kan ture ifa baasun, Seenaa, duudhaa fi aadaa oromoo Tuulamaa bu’uura eenyumma Oromoo ta’u guyyaa 3’f erga mari’atame booda Abba Gadaa godina Salaalee filachun, kallattii teechifachun akkasumas Hawwisoo salaalee irraa deebi’amee akka hundeffamu murteessun goolabamee jira. Baga Gammaddan!!! nutis Gammanneerra.
Kaleessa galgala sa’aatii 12:00 irraa jalqabee hanga sa’aatii 3:30 tti kaabinootaa fi abbootiin halangaa wal-gahii gaggeessaan irratti dargaggoota mana hidhaa keessa jiran irratti akkataa himata itti bananii fi turan kaabinoonni marii kana irratti shira kana qopheessuun dargaggoota 200 olta’an kunniin tokko akka hidhaa hin baane kanneen karoorsan
1, Aliyyii Yaasuu (bulchaa aanaa G/G)
2, Mulugeetaa (itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa)
3, Amaddiin Ammadee (itti gaafatamaa waajjira nageenyaa)
yoo ta’anillee abboottiin halangaa A/G/G garuu dargaggoota badii qabu malee kan biraa akka hiikamu jechuun mormanii jiran. Abbootiin halangaa himata yakkaa mana murtii godinaatti banuudhaa jecha godinarraa ergamanii marii kanarratti argaman
1, Abaadir (abbaa halangaa godina harargee bahaa)
2, Taaddalaa (abbaa halangaa godina harargee bahaa) akka ta’an beekamee jira.
Martin Plaut / 3 days ago
< Martin Plaut) — This is the answer to a Parliamentary Question about the Ethiopian government’s response to the Oromo protests and the credibility of the Ethiopian Human Rights Commission into the way in which these were handled.